May Nyane: IC တဲ့ဗျိုးးးးး
( ဒေါ်မေငြိမ်း၏ တောသားနှစ်ယောက် ဘလော့တွင် ပြောဆိုချက်
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒကို ထုတ်ဖေါ်ခွင့်၊ ဝေဖန်ခွင့်ကို ပေးရပါသည်။ သင်၏ တောင်းဆိုချက်သည် ရှက်ဖွယ်ဖြစ်ပေ၏။ နအဖကို သင်တို့က အာဏာရှင်ဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသော်လည်း မည်သည့် နအဖ ဘလော့မှ သင်တို့ ဒီမိုဘလော့တွေလို အရှက်မဲ့စွာ ဝေဖန်ခွင့်အား ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိပါ။ နအဖဘလော့များ၏ ဆီပုံးများတွင် ဒီမိုသမားများ အောက်တန်းကျစွာ ဆဲဆိုနေသည်ကို သင်ကိုယ်တိုင်သိပါသည်။ (သင်ကိုယ်တိုင်ပင် သင်တို့အဖွဲ့သားများမှ နအဖ လူဟန်ဆောင်ကာ သားမယားသဖွယ် အကြိမ်များစွာ ပြောဆိုခံခဲ့ရပါသည်။) သို့သော် နအဖ ဘလော့များ၏ သဘောထားကြီးမှုကို သင်အနေဖြင့် အတုယူခြင်း မရှိသည့် အတွက် ရှက်ဖွယ်ဖြစ်ပေ၏။ ထို့ကြောင့် ကျနော်တို့တောသား နှစ်ယောက်သည် သင်၏ အရှက်မဲ့သော တောင်းဆိုချက်ကို လိုက်လျောမည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်ကို ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားခြင်းအတွက် ခံစားရတယ်ဆိုရင် ခွင့်လွတ်ပေးပါ။ တောသားဆိုသည်မှာ တည့်တည့်ပဲ ပြောတတ်ပါသည်။
Comment မရေးစေချင်ရင်လဲ ဖြုတ်ထားလိုက်ပေါ.
ခက်တာမှတ်လို.။ချီးမွမ်းမြှောက်ပင်.တဲ. Comment တွေ
ကိုပဲ လက်ခံချင်ရင်လဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကြေညာထားပါလားခင်ဗျ။
နောက်ပီး ဘယ်သူမှ မမေးပဲနဲ.လဲ အသက်ဘယ်လောက်
ရှိပါပီဆိုပီး ဈေးကွက်စီးပွားရေး လုပ်နေတာလဲ တမျိုးကြီးပဲဗျာ ။အသက်ကြီးပေမဲ. မပျက်စီးသေးဘူးလို.
ကြေညာတာလားခင်ဗျာ။ကြောင်ချေးတို.က စာသိပ်မတတ်တော.နဲနဲဝေးတယ်ခင်ဗျ။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေး လုပ်ပါဗျာ။
နအဖဘာလုပ်လုပ် အပုတ်ချ အရွဲ့တိုက်ရမည်ဟု ဒီမိုတို့ သဘောပေါက်၏။ ထို့ကြောင့်လည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆန့်ကျင်နေခြင်းဖြစ်၏။ အခြေအနေကို မသုံးသပ်ပဲ ပုံသေနည်းနဲ့ လုပ်ကိုင်နေသောကြောင့် ငတုံးများဟု သိအပ်၏
ဒီမိုဘလော့တွေသည် တွေးခေါ်စရာဘာတစ်ခုမှ မပေးပါ.. နအဖကို အရေမရအဖတ်မရနဲ့ မုံန်းအောင်လုပ်ခြင်းသာ သူတို့စိတ်ဝင်စား၏။ နအဖကို မထိတထိ အရွဲ့တိုက်ဖို့သာ သူတို့က အားပေး၏။ လိမ္မာပါးနပ်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့ သူတို့တွင် ဥာဏ်မရှိ
ဒီမိုသမားဆိုသည်မှ နအဖ ဘာလုပ်လုပ် အမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ပါသည်။ ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဒီမိုတွေဆန့်ကျင်မည်ဆိုသည်ကို နအဖ ကြိုတွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကြိုတွက်ထားသည့်အတိုင်း ဒီမိုများဆန့်ကျင်လေသည်။ နအဖ၏ ကျော့ကွင်းထဲ ဒီမိုတွေ ဦးဏှောက်မရှိစွာ ပျော်ပျော်ပါးပါး ၀င်ခဲ့ပြီ . . . ဒီမိုတွေ အရှက်ကွဲပြီး ဒုက္ခရောက်တော့မည် . . .